13 | May | 2013 | QEERROO
Posted on May 13, 2013 by Qeerroo
Yaa dhaloota Qubee
Jarroo biyya gubee
Jarroo biyya gubee!
Akkoo fi akaakaa-llee
Lafarraa nu duguuguuf
Hamtuu nuuf abbala!
Beelaan nama huqqisee
Kana yoom hubataa?
Yeeyyiin gaaraa as-galee
Akkum Mosolonii ciibsee nama qalee
Majaan gubbasii as-galee
Akkum Minilik-faa ciibsee nama qalee!
Waggaa digdamii-lama guutuu
Kunoo-kaa biyyasoo guutuu
Dhiddhiitee nama bitaa
Karcalleettis naqee fixaa!
Yoom Oromoo qofa tahe
Kan inni gorra’u
Gadqabee kan acha’u
Ilmaan Kuush kan beenyaa:
Afaari fi Somaalee
Sidaama fi Hadiyyaa
Kaanis biyya biyyaa
Akka dullacha masqalaa!
Kan jedhuun “Shaanqillaa”
Warra dur abbootiin-saa
Warra dur obbolaan-saa
Gabaa dhaabee ittiin-daldalate
Warra Omoo hundaa ittiin-shaqaxate
Kunoo amma lafarraa buqqisa
Kilaashoon gadqabees kukuffisa!
Hayyee, qeerransoota Qubee
Hayyee, yaa dhaloota Qubee
Gaaf tokkollee harmeen dagatinaa
Kakuu-dhaa, laguu-dhaa irraan baqatinaa!
Biyya guutuu labsaa
Cubbuu fi yakka dabsaa
Hundee gabrummaa balleessaa
Biyya Gadaa, Oromiyaa keessaa!
Kan sabaa kan qomoo
Ni mootuu abdaddhaa!
Impaayera dulloomee raamma’e
Kan addunyaa guutuun ofirraa acha’e
Supphuuf homaa hin dhama’inaa
Kun hoodaa gaaf tokkollee
Oromiyaa-Kuushiyaa hin dagatinaa!
Kanallee misooma fakkeessaa
Addunyaatti oliyyee odeessaa!
Beela harkisee fidee
Gondorii as fidee
Maqalee as fidee
Namummaa fi seera Gadaa dide!
Sirna warra mootii
Dhaalmaa kan abbootii
Sirna sirnaa gadii
Doofummaa kan badii
Qawwee fi fannoon nutti fide!
Qaroomina sirna Gadaa
Kan Waaqeffannaa lalisaa akka Odaa
OROMIYAA Biyya Gadaa
Kunoo, qabatee irra-ciisa
Ilaa, nu qawween kaanu malee
Gaaraa-dakaa waltaanu malee
Yoomum tolaan nu dhiisaa?
Egaa, yaa dhaloota Qubee
Eekaa, qubeeffattoota Qubee
Yaa abdii biyya kiyyaa
Anoo kanaafan iyyaa:
Hin ganinaa waadaa jagnootaa
Hin gatinaa yabboo gamnootaa
Kan Jaarraa faa kan Maammoo
Kan Waaqoo faa kan Elemoo
Kan sabaa-fii kan qomoo
Kan Taaddoo faa kan Magarsaa
Dhalootaa dhalootatti dabrsaa!
Hayyee, gichilloota Qubee
Maarree, yaa dhaloota Qubee
Walqabaddhaa beenaa, deemaa
Deemaa, laggeen Oromiyaa cufa seenaa!
Roorroo qabaa kuffisaa!
Kan Gadaa deebisaa, deebisaa
Impaayera kana muuziyama teessisaa!
Imimmaan harmee Oromiyaa
Imimmaan aayyoo Kuushiyaa
Irraa haqaatii qoorsaa
Saba keessan boonsaa!
“Kakuu-dhaa dubatti hin deebinu”
“Laguu-dhaa harmeerraa hin dheensinu”
Jechaa waliin tarkaanfaddhaa, tarkaanfaddhaa
Namummaan namummaa olkaasuuf kakaddhaa!
Jechaa deddeemaa, dhaadaddhaa
Dhalawwan Kuush gaaraa-dakaa waammaddhaa
Awwaala gabrummaa irratti OROMIYAA jaarraddhaa!
Barliin, 15. 05. 2013
**: Walaloon kun Oromoota yeroo ammaa manneen hidhaa warra Wayyaanee keessatti: garafamaa, waxalamaa dabrees waadamaa jiraniif, dhalawwan Oromoo gara-jabeessummaa fi bineensummaa mootummaa Habashaa baqachaa otoo jiranuu, yabaloo fi doonniin ittiin-deemaa jiran Garba Adan keessatti garagalee irbaata qurxummii nama-nyaatuu, kan shaarkii tahuun hafanii fi kanneen adaala (“barahaa“) Sudaani fi Liibiyaa keessatti dhumanii awwaalli isaanii cirracha-adaalaa taheef, kan jiraniif: mararfannoo, biradhaabannoo fi jajjabeessa hamilee haa tahu! WAAQNI imimmaan oggaan ishii tana barreessu narra yaa’aa jiru kana arguun, fuula isaa gara isaaniitti akka deebisu abdiin qaba!
(Gabaasa Qeerroo Jimmaa Caamsaa 12,2013) Sagantaan kabajaa Ayyaanaa Irreechaa kunis akkuma beekamuu kadhannaa Waaqaa Jaarsooliin Oromoo akka hangafummaa isaaniitti caarraa Gadaa fi hangafummaa hedachaa jalqaba irraatti kadhaa waaqaan egalame.
sirnna kadhannaa waqaa manguddootni Oromoo yeroo gaggeessaan ” Hayyee yaa Waaq nu dhaga’ii , kan hidhamee nuu hiikii, kan biyyaa ba’ee biyyaattii nu deebiisii, mirgaa nuf keennii, biyyaa kan abbaa biyyaa godhii, tokkummaa fi jaalaalaa Oromummaa keenyaan waliitti nu jaalaadhuu Oromoo tokkoo godhii,” jedhuu fi kkf jechuun egalan.
Ayyaanaa kanaa Ilaalchiisuun Ijoolleen Oromoo godinaalee Oromiyaa garaaaraa irraa dhufuun irraatti argamuun midhaginaa Ayyaanichaa akka malee dabaluun kabajachaa oolaan, Ayyaanaa Irreechaa kana irraatti Ummaannii Oromoo Kumatamaan lakka’amuu argamuun kabajataan.
Ayyaanaa Irreecaa kana ilaalchisuu Mootummaan Wayyaanee humna waraanaa poolisotaa isaa heddumminaan bobbaasee jeequuf sodaachiisuuf yaalii guddaa taasisuuyyuu uummaannii Oromoo keessaattuu dargaggoonni Oromoo tokkummaa fi gootummaan duraa dhaabbaachuun eenyuummaa fi maalummaa Oromoo dinaatti argisiisaan, utumaa basaastootnii abbaa irree fi poolisonnii abbaa irree lafa dhiphiisanii Qeerroon dargaggoonni Oromoo WBO boonnaa, ABO boonnaa, Leencaa boonnaa, Qeerroo boonnaa Oromiyaa boonnaa, Tokkuummaa boonnaa, Oromoo fi Oromummaa boonnaa jechuun diinaa isaan duraa dhaabbaachuuf baatee aafan qabachiisaan.
Barruuleen Warraaqsaa gaaffii mirga abbaa biyyuummaa sarbamuu mirga namommaa fi dimookiraasii, sarbamuu mirga amantii fi kkf of irraa qaban haalaa dhugaa Oromoo fi mirga Oromoo kabachiisuun danda’amuun barreefaamanii guutummaa goodinaa jimmaa keessaa keessaattuu magalaa jimmaa keessaatti bittinneeffaaman, kana ilaalchiisuun gabaasa dabalataa qabnu keessaatti dhiyeessina.
Sochii uummataa Oromoo kanaa irraa ka’uun mootummaan abbaa irree wayyaanee kan biyyattii keessaatti mirga dhala namaa,mirga dimookiraasii, mirga amantaa Waqeeffaannaa sarbee umrii angoo isaa dheereffaachuuf jiraatu, dhiphinaa keessaa seenuun oliif gadii rafamuun uumataa gooluuf yaaliin godhamaa turee tokkuummaa qeerroo dargoggootaa Oromootiin fashalaa’e.
uummaannii Oromoo ifaan ifaattii tokkuummaa isaa jabeeffaatee diinaa fi gantootaa isaatti eenyummaa isaa argisiifachuun, haala baayee miidhagaa fi simboo qabeessaa ta’een ayyaannii irreechaa Arfasaa Tulluu Beegiitti kabame.